WARIYAYASHII IDAACADA BBC DA E MUQDISHO OO ISAGA HULEEYEY XAMAR UNA DUULAY HARGEYSA | Toggaherer's Weblog
Wariyeyaasha Idaacada BBC-da uga soo warama Magaalada Muqdisho oo dagaalo ay ka soconayaan ayaa isaga huleelay maalin ka hor, iyadoona ka hor ka bixitaankooda Caasimada howlahooda warar tabinta si KMG kadib markii Xarunta Dhexe ee BBC-da Magaalada London ay kula talisay arrintaas.
Saddexda Wariye ee ay Idaacada BBC-da Laanteeda Afka Soomaaliga ku laheyd Caasimada ayaa isaga tagay Magaalada mushaakilka iyo colaadaha leh, iyagoona u kicitimay Magaalada Hargeysa ee dhulka Somaliland.
Wariyeyaasha kala ah Maxamed Ibraahim Macalimuu oo ahaa Wariyaha sida joogtada Idaacada BBC-da ugu tabinayay macluumaadka xasaasiga iyo Wariyeyaasha kala ah Maxamed Maxamuud Dhoore iyo Ayaanle Xuseen Cabdi ayaa u wada duulay Magaalada Hargeysa, kadib markii la sheegay in xaaladoda looga baqay Magaalada Muqdisho.
Ka sokow dilalka iyo ugaarsiga lagu haayay Wariyeyaasha ayaa hadana waxay Wariyeyaashan ahaayeen kuwo xaaladahaas isaga howl galayay, waxaase horay isaga jiray digniino kala duwan oo siyaabo kala duwan loogu gaarsiinayay Wariyeyaashaas.
Idaacada BBC-da ayaa ah sharci u degan inay wariyeyaasheeda kala baxdo goobaha qatarta ah marka ay dhacaan xaalado ammaan daro, waxaana wariyeyaashan ka bixitaankooda Muqdisho ku soo beegmayaa xilli inta badan ay Magaalada la wareegayaan Kooxaha Mucaaradka